Kingston Stanley | Indlela yokuma nokufumana i-CV yakho?
Ngamana 18, 2019
UNaveed Khan: Ibali lePakistan e Dubai
Ngamana 19, 2019
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Ngamana 19, 2019
Kingston Stanley kunye ne-Dubai City Inkampani
UKumston Stanley - Indlela yokuma kwaye ufumane i-CV yakho?
UKingston Stanley -Labo bonke abaviwa abasokolayo ukufumana impendulo, okanye u udliwanondlebe olusuka kwizicelo zomsebenziNanga amanyathelo ambalwa anokunceda.
Khumbula umgca umlawuli, umphathi wokuqesha okanye umcebisi wokuqesha Ihlala izaliswe rhoqo ngamakhulu ee-CV. Ngokuzithoba, Inani labagqatswa banendlela “yokusasaza inkqubo” yokuqesha kwaye baya kuthumela i-CV yabo kwindima nganye, nokuba abalingani bili. Ndingakucebisa ukuba wenze oku kulandelayo:
Thumela i-CV yakho kwindima oyidibanisa ngokupheleleyo, ngokweelwimi, amava kwicandelo kunye namava eminyaka yamava.
Funda yonke i-advert ngokucophelela kwaye uqinisekise ukuba ukhawule zonke iibhokisi.
Arhente zokuqesha phantse baya kufuna amava akhethekileyo eshishini, njengoko umxhasi wabo eya kuthi ahlawule umrhumo kumdlalo othe ngqo.
Ukuba unqwenela ukutshintsha amashishini, yenza njalo kwishishini elithelekisayo, okanye uhambe ngqo neenkampani (kungekhona nge-arhente).
Nje ukuba uthumele i-CV yakho kumqeshi, zama ukufumanisa ukuba ngubani umphathi wokuqasha kwaye ubone ukuba unganakho na ngokukhawuleza ukuncokola ngemizuzu ye-5 ngokubhekisele kwiprofayili yakho.
Gcina ugcina ukuba i-CV yakho ithunyelwe phi na, gcina ucwangcisiwe kwaye imephu yentengiso nayo Uluhlu lwabaqeshi abanokubakho.
Zimasa imicimbi yenethiwekhi enjenge dubai I-Lynx, i-MEPRA, iSixeko, i-Gitex, iMarike yokuHamba ye-Arabian kwaye bahlangane ngqo nabenzi bezigqibo. Ubuso ngobuso buhlala buhamba phambili.
Ekugqibeleni, inxalenye ebaluleke kakhulu yodliwano ndlebe ukufumana udliwano-ndlebe. Xa oku kubhalwa kuyo ukuqinisekisa ukuba uchithe ixesha ukulungiselela kwaye ungaphenduki ngaphandle kokwenza uphando lwakho.
Tyelela u Kingston Stanley
Siyakwazi ukubonelela ngeengcebiso xa ukhusele udliwano-ndlebe
Khumbula ukwenza uphando lwakho kwinkampani. Funda icandelo elithi 'Mayelana Nathi' yewebhusayithi kwaye usebenzise olu lwazi xa uthetha ngokuthe ngqo malunga nokuba kutheni ungafuna ukubasebenzela. Sukutsho nje ukuba ufuna ukusebenzela inkampani yezizwe ngezizwe, inkampani enkulu okanye isiqalo esincinci. Yenza iimpendulo zakho ZIKHETHEKILEYO kumthengi. Jonga iprofayile yenkampani kwiWikipedia, njengoko oku kuya kukuxelela okuninzi ekufuneka ukwazi ngako.
Yiba lixesha lodliwanondlebe. Ngexesha kuthetha imizuzu emihlanu ukuya kwelishumi ngaphambi kwexesha. Ukuba kukho imfuneko, thatha ixesha lokuya kwindawo yodliwanondlebe kwangaphambi kwexesha ukuze wazi ngokuthe ngqo apho uya khona, nokuba nini kuyakuthatha ukufika apho.
Ugqoka ngeNtsebenziswano ngempumelelo
Qinisekisa ugqoke ngokufanelekileyo ukuphumelela iNdliwano Umbono wokuqala owenzayo kumqeshi onokubakho unokwenza umahluko omkhulu. Isigwebo sokuqala kudliwanondlebe olwenzayo izakusekelwa kwindlela ojongeka ngayo, nento oyinxibayo. Kungenxa yoko kubalulekile ukuba unxibe ngokufanelekileyo kudliwanondlebe lomsebenzi.
1. Wazi ntoni malunga nenkampani? -Zisungulwe nini, iindawo zeofisi zelizwe jikelele, iintloko zabasebenzi njl. Njl.
2. Yintoni onomdla kuyo malunga nale ndima? -Ukuba kunokwenzeka qiniseka ukuba uyayazi imisebenzi evela kwinkcazo yomsebenzi
3. Ndixelele ngawe - Lo mbuzo uthetha "undinike ubungqina obubanzi bokuthi ungubani, uthetha ngokuzimela, ngaphambi kokuba sitshintshe kwiindawo ezithile."
4. Kutheni sifanele sikuqeshe? -Cinga ngamava akho afanelekileyo / amandla akho
5. Ziziphi amandla akho kunye nokubuthathaka? Yiba nomzekelo omnye ngamnye.
6. Zithini iinjongo zakho zangomso? -Yiba nengqondo /career ingqondo
7. Kutheni ushiya umsebenzi wakho ngoku?
8. Unokusingatha njani uxinzelelo? - Thetha malunga nendlela obeka phambili ngayo umsebenzi wakho.
9. Ziziphi iimpendulo zakho zomvuzo?
10. Yiyiphi imibuzo onayo ngathi?
Sukuthetha nje uluhlu lwezakhono eziphambili. Thetha malunga ne-1 okanye i-2 yamandla aphambili-afanelekileyo kwisikhundla-kwaye uxhase nge I MI ZEKELO. Ngezantsi ezinye iingcamango kuwe;
1. Ndinobuchule obubalaseleyo bokubhalwa. Ndihlala ndibeka iingxelo zokushicilela kubathengi okanye izicwangciso zokuthengisa kubalawuli bam, ngexesha elifutshane kakhulu.
2. Ndingumnxibelelanisi ogqwesileyo kwaye ndiyakwazi ukuthetha ngokutyibilikayo isiArabhu nesiNgesi, ndinamava angaphambili ekusebenzeni uninzi amaqela ahlukeneyo kunye aphumeleleyo.
Ukuxoxa ngobuthakathaka wakho ngumbuzo onobuqili. Udliwano-ndlebe kufuneka NGAWO Nyaniseka nakwizinto ezimbi ezincinci. Khumbula ukuzama ukuguqula ubuthathaka bakho bube namandla.
1. Ndinotyekelo lokuthetha â € ˜yesâ € ™ kakhulu ukusebenza kudluliselwe kum kwaye kuya kuhlala ndizigcina ndixakekile eofisini kude kube kugqityiwe umsebenzi, nokuba ayilolwam uxanduva lwam.
KUBALULEKILE: Ekupheleni kokuphelisa ubuthathaka kwindawo efanelekileyo.
Ekupheleni kodliwanondlebe BUZA imibuzo embalwa Ukwakha udlwengulo kunye nodliwanondlebe, njenge;
1. Yintoni oyithandayo kakhulu malunga nenkampani?
2. Yintoni isitayile solawulo, okanye inkcubeko yeofisi?
3. Bangaphi abantu kwiqela?
Ngaba ikhona into ongathanda ukuba ndiyidlule kwakhona? Athini la manyathelo alandelayo?
Malunga noKumston Stanley
UKingston Stanley yingcaphephe yedijithali ekhokelayo, ukuthengisa kunye ne-arhente yokuqesha ubuchwepheshe e-Middle East nase-UK, isebenza kuphela nabathengi kunye nabagqatswa kulo lonke ulwazi lokuthengisa, Amacandelo edijithali kunye nawetekhnoloji ukusukela kwangoko i-2011.
Siza kukunceda ufumane, isikrini kunye nokukhetha umntu oza kulonyula imisebenzi yentengiso edibeneyo kunye netekhnoloji, kwaye sinothungelwano olukhulu kakhulu, olukhoyo ngoku nolunabagqatswa abafanelekileyo. Nokuba unendima ekufuneka ikhawuleze ukuzaliswa okanye ipotifoliyo yokubulala, uzakufumana into oyifunayo apha. Ukuziphatha okuqinileyo, ukuthembeka, ukuthembeka kunye nokusebenza kunye neenjongo zintsika zethu ezine ishishini kwaye oku kubonisa uphawu lwethu, abasebenzi bethu kunye nabantu esibamele.
Inkampani yeSixeko sase Dubai ngoku ukubonelela ngezikhokelo ezilungileyo zemisebenzi eDubai. Iqela lethu ligqibe ekubeni longe ulwazi ngolwimi ngalunye Imisebenzi e-Dubai Guides. Ke, unale nto engqondweni, ngoku unokufumana guidesIingcebiso kunye nomsebenzi kwi-United Arab Emirates ngolwimi lwakho.
I-Turkey iyaphuma e-Dubai
Fumana umsebenzi njenge-expat esuka eThailand
Kuba u-Uzbekistan uthumela
Imisebenzi e-Dubaï yezikhulumi zasePoland
Isikhokelo sabathetheli basePortugal e Dubai
Imisebenzi e Dubai ngeentetho zesiGrike
Ukuthumela amaPhilippines e-Dubai
Isikhokelo soLwimi lwesiFrentshi sokuthumela
Ukuthetha abasebenzi baseCroatia e Dubai
Fumana umsebenzi e-Dubai ukusuka eSpain
I-Indian expats e Dubai